Mahatsiaro tena ho manan-katao amin'ny diaben'ny lova
Desambra 5, 2016
Delhi dia toerana feno fientanam-po, fientanam-po, fientanam-po ary fahafinaretana. Raha tsy mbola niainanao ny iray tamin'ireo zavatra ireo tany Delhi, indrisy, tsy mbola niaina ny tena fotom-bolan'ny renivohitra ianao.
Capital dia manana zavatra betsaka ho anao hahavitana ny hetahetanao mandehandeha toy ny toerana ara-pivavahana lehibe, ny toerana fisakafoanana manangasanga, mahatalanjona Dia an-tongotra taloha Old Delhi ary maro hafa. Aza mijanona tsy mahazo ireo hatsaran-tarehy sy harena ary fientanam-po ireo. Raha mbola tsy nahita renivohitra toy ny toerana fitsangatsanganana ianao dia fotoana tokony hanaovanao izany.
Hiaina ny Ecstasy of Old Delhi
Efa nahafantatra ny tenanao amin'ny lova mahafinaritra an'i India ve ianao? Raha tsy izany, maninona ary ankehitriny? Old Delhi dia manana toerana mahafinaritra ho anao. Manatontosa diaben'ny lova any amin'ny fanjakan'ny Old Delhi ary ho fantatrao ny momba ny zavatra tsara.
Ny charisma an'ny moske lehibe indrindra any India
Ny Jama Masjid no moske lehibe indrindra any India. Manintona lehibe ireo mpizahatany eran'izao tontolo izao. Eo andrefan'ny Fort Red lehibe no misy azy. Fantatrao fa manana vavahady telo izy io, tilikambo efatra ary minareta mijoalajoala roa izay efa-polo m ny hahavony. Ny vavahady avaratra amin'ity moske ity dia misy ambaratonga sivy amby telopolo, raha ny vavahady atsimo manana ambaratonga telo-polo ary amin'ny farany ny vavahady atsinanana dia manana ambaratonga dimy amby telo-polo.
Azonao atao koa ny manakarama akanjo manokana mba hitovizanao amin'ny olona eo an-toerana. Ny tokotanin'ity moskea ity dia afaka mametraka mpivavaka dimy arivo sy roa alina. Ny tany iray manontolo dia vita amin'ny marbra fotsy sy mainty ary manome ny mason'ny vavaka Silamo. Azonao atao ny miaina ny Korany voasoratra amin'ny diera sy zavatra maro hafa mahavariana. Ho gaga ianao hahafantatra fa tsy ny Silamo ihany fa ny olona samy hafa finoana no mitsidika an'io moskea io.
Ny hafinaretan'i Dharampura Haveli
Mitsidika an'i Dharampura Haveli avy amin'ny toerana samihafa ny olona. Ity Haveli ity dia tsy mahazatra; mampahafantatra ny mpitsidika ny tsiro tamin'ny vanim-potoana Mughal. Ny famoronana sy ny hatsaran-tarehy maritrano dia mitaona ny fon'ny olona rehetra. Raha mieritreritra ianao fa mankaleo ny mitsidika an'i Haveli izay efa naka endrika taloha, dia diso hevitra ianao. Eny, hanova ny fomba fijerinao i Dharampura Havel. Eto ianao dia afaka manandrana ny plethora amin'ny fifangaroan'ny chic ankehitriny sy taloha.
Na dia efa namaky momba ny Havelis mahafinaritra foana aza ianao dia tonga ny fotoana hitsidihanao an'i Havelis toy izany. Aza mihazona ny tenanao tsy hanana ireo traikefa ireo. Ity Haveli ity dia afaka mameno anao amin'ny avonavona, dera ary wow.
Raiso am-pahatsorana ny fahafaham-po avy any Digambar Jain Lal Mandir
Digambar Jain Lal Mandir dia toerana ara-pivavahana malaza be any Delhi. Satroboninahitry ny sain'ny olona tia mitsidika toerana ara-pivavahana io. Ity tempoly ity dia nanatri-maso vanim-potoana samihafa ary iray amin'ireo tempoly tranainy indrindra eto an-drenivohitra. Eo izy io hatramin'ny andro nanjakan'i Aurangzeb.
Ny maritrano Digambar Jain Lal Mandir dia tena kanto ary feno sary sokitra. Mitondra lanja be ity tempoly voatondrato vato mena ity. Ny molotra mofomamy dia miavaka amin'ny fombany ihany koa. Izy io dia misy hopitaly vorona izay malalaka tanteraka ny fitsaboana. Ka inona no mety ho ambony noho io?
Noho izany, mandeha an-tongotra any Delhi afaka mampahatsiaro anao ho manan-karena sy mirehareha. Ny maha-zava-dehibe ireo dia an-tongotra ireo dia mihamitombo kokoa rehefa manana torolàlana hampahafantatra anao ny zavatra rehetra ao ambanin'ny karipetra amin'ny faritra ianao.